ဥရောပတိုက်ရှိ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေများ စာရင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
အစဉ်အလာအရ ဥရောပတိုက်အတွင်း လုံးဝတည်ရှိနေသော နိုင်ငံများ
ဥရောပတိုက်အတွင်းဘက်ဟု မှတ်ယူထားသော တိုက်နှစ်ခုလုံးနှင့် ထိစပ်နေသော နိုင်ငံများ၏ နယ်မြေ
ဥရောပတိုက်အပြင်ဘက်ဟု မှတ်ယူထားသော တိုက်နှစ်ခုလုံးနှင့် ထိစပ်နေသော နိုင်ငံများ၏ နယ်မြေ
ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာအရ အာရှနိုင်ငံများ (အာမေးနီးယားနိုင်ငံနှင့် ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံများ အပါအဝင်)[ကိုးကားချက်လိုသည်]
ဤသည်မှာ ဥရောပ၏ အမျိုးမျိုးသော ဘုံအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအချက်တစ်ခုခု၏အောက်တွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ ပတ်သက်နေကြောင်း အထင်အရှားရှိသော နိုင်ငံများစာရင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ ၅၀ ခုမှာ အသိအမှတ်ပြု အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများဖြစ်ပြီး ကိုဆိုဗိုနိုင်ငံသည် အကန့်အသတ်ဖြင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသော်လည်း တောင့်တင်းခိုင်မာသော နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုကို ရရှိသည်။ နိုင်ငံ ၅ ခုမှ ကြီးမားစွာ အသိအမှတ်ပြုခြင်း မခံရသော de facto နိုင်ငံများဖြစ်သည်။ စာရင်းတွင်းရှိ အသိအမှတ်ပြုနိုင်ငံ ၈ ခုမှာ ဥရောပနိုင်ငံများနှင့် တစ်ဆက်တည်းတည်ရှိနေခြင်းမဟုတ်သော သို့မဟုတ် အထူးနိုင်ငံရေးသဘောတူညီမှုရှိသည့် နိုင်ငံများဖြစ်သည်။
၁ ဥ‌ရောပတိုက်၏ နယ်နိမိတ်မျဉ်းများ
၁.၁ ဥရောပတိုက်၏ ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ်မျဉ်းများ
၁.၂ ဥရောပတိုက်၏ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ်မျဉ်းများ
၂.၁ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲဝင်နှင့် လေ့လာသူနိုင်ငံများ
၂.၂ အခြားသော နိုင်ငံများ
၃ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရ အစိတ်အပိုင်းများ
ဥရောပတိုက်၏ ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ်မျဉ်းများ[ပြင်ဆင်ရန်]
အများအားဖြင့်အသုံးပြုနေသော ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုအောက်တွင် အာရှတိုက်နှင့် ဥရောပတိုက်အကြား နယ်နိမိတ်မျဉ်းသည် ယူရယ်တောင်တန်း ၊ယူရယ်မြစ်နှင့် ကက်စပီယံပင်လယ်တို့၏ အရှေ့၊ မဟာကော့ကေးဆပ်တောင်တန်း  နှင့် ပင်လယ်နက်နှင့် ၎င်းမှ စီးဆင်းသော ဘာ့စပေါ့ရပ်မြစ်နှင့် ဒါတန်အဲ့စ်မြစ်တို့မှ တောင်ဘက်ဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည်။  ထို ဘုံအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို မူတည်၍ တိုက်ကြီးများအား ခွဲခြားလျှင် အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံ၊ ‌‌ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၊ ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၊ ရုရှားနိုင်ငံနှင့် တူရကီနိုင်ငံတို့သည် အာရှနှင့် ဥရောပတိုက်ကြီးနှစ်ခုလုံးတွင် နယ်မြေများရှိသောကြောင့် တိုက်ကြီးနှစ်ခုလုံးနှင့် ထိစပ်နေသော ကြားနိုင်ငံများဖြစ်ကြသည်။ ထိုနိုင်ငံများထဲမှ နိုင်ငံ ၄ ခုသည် အာရှတိုက်နှင့် ယေဘုယျအားဖြင့် ဆက်နွယ်နေပြီး ရုရှားနိုင်ငံသည် တစိတ်တပိုင်းအားဖြင့် ဥရောပတွင် တည်ရှိနေသောလည်း သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ နိုင်ငံရေးနှင့် လူမျိုးရေးတို့သည် ဥရောပတိုက်နှင့် ဆက်နွယ်၍နေသောကြောင့် ဥရောပနိုင်ငံအဖြစ် မှတ်ယူသည်။
အနောက်အာရှဒေသရှိ ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံသည် အနာတိုလီယား (သို့မဟုတ် အာရှ မိုင်းနား) အနီးတွင်ရှိသော်လည်း တခါတရံတွင် ဥရောပအစိတ်အပိုင်းဟု မှတ်ယူပြီး ဥရောပသမဂ္ဂ၏ လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်ကဲ့သို့ပင် အာမေးနီးယားနိုင်ငံသည် အနောက်အာရှဒေသတွင် လုံးလုံးတည်ရှိနေသော်လည်း များစွာသော ဥရောပအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေသည်။
မြေထဲပင်လယ်သည် အာဖရိကတိုက်နှင့် ဥရောပတိုက်ကို ထင်းရှားစွာ ခြားနားထားသော်လည်း အစဉ်အလာအရ ဥရောပကျွန်းများဖြစ်သော မော်လတာနိုင်ငံ၊ စစ္စလီကျွန်းနှင့် ပန်တီလေးရီးယားကျွန်းကဲ့သို့သော အစဉ်အလာအရ ဥရောပကျွန်းများသည် အမှန်တကယ်တွင် အာဖရိကန်ကျောက်လွှာတွင် တည်ရှိသည်။  အိုက်စလန်နိုင်ငံတည်ရှိရာ ကျွန်းသည်လည်း ယူရေးရှန်းကျောက်လွှာနှင့် မြောက်အမေရိကန်ကျောက်လွှာကို ခွလျက် အလယ်အတ္တလန်တိတ်ကြော(Mid-Atlantic Ridge )၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် တည်ရှိသည်။ 
အချို့သော နယ်မြေများသည် ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာအရ ဥရောပ၏ အပြင်တွင် တည်ရှိနေသော်လည်း ဥရောပနိုင်ငံများနှင့် ခိုင်မြဲသော ဆက်ဆံရေးရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဂရင်းလန်ကျွန်းသည် ဥရောပနိုင်ငံများနှင့် လူမှု-နိုင်ငံရေး ဆက်နွယ်မှုများရှိပြီး ဒိန်းမတ်ဘုရင်နိုင်ငံတော်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း မြောက်အမေရိကတိုက်နှင့် နီးကပ်စွာ တည်ရှိနေပြီး ထိုတိုက်နှင့် များသောအားဖြင့် အဖွဲ့ဖွဲ့မှုများလည်း ရှိသည်။ 
အခြားသောနယ်မြေဒေသများဖြစ်သည့် ပြင်သစ်ပင်လယ်ရပ်ခြားဒေသ  ၊ အာဖရိကကမ်းရိုးတန်းတွင်ရှိသော စပိန်မြို့များဖြစ်သည့် စီယုတာမြို့နှင့် မယ်လီလာမြို့  နှင့် ကာရစ်ဘီယံနယ်သာလန်ကျွန်းများဖြစ်သော ဘာနေယားကျွန်း၊ ဆာဘာကျွန်းနှင့် စိန့် ယူစတေးရှပ်ကျွန်း  တို့သည် ဥရောပနိုင်ငံများ၏ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော်လည်း အခြားသော တိုက်ကြီးများတွင် တည်ရှိနေသည်။
ဥရောပတိုက်၏ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ်မျဉ်းများ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဥရောပတိုက်၏ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ်များသည် မတူညီသော နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ အသုံးပြုသော ဥရောပတိုက်၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဥရောပကောင်စီ(Council of Europe)နှင့် ဥရောပ လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တရားရုံး(European Court of Human Rights)တို့တွင် ၎င်းတို့၏ ဥရောပအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ ၄၇ နိုင်ငံပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ ဥရောပအဆင့်မြင့်ပညာရေးဧရိယာ(European Higher Education Area)တွင် ၄၈ နိုင်ငံပါဝင်ပြီး ဥရောပ ယဉ်ကျေးမှုသဘောတူညီချက်(European Cultural Convention)နှင့် ဥရောပအိုလံပစ်ကော်မတီ(European Olympic Committees)တွင် ၅၀ နိုင်ငံပါဝင်သည်။
ဥရောပတိုက်၏ နိုင်ငံရေးအရ မြေပုံနှင့် ၎င်းအားဝန်းရံနေသော ဒေသ
အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများသည် လူထုအတွက် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနှင့်ပတ်သက်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များပြုလုပ်ရေးတွင် ထိရောက်သော အချုပ်အခြာအာဏာရှိသည့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။ မွန်တီဗီဒီယိုသဘောတူညီချက် (Montevideo convention)အရ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတော်သည် အမြဲတမ်းနေထိုင်သော လူထု၊ တိကျသော နယ်မြေ၊ အစိုးရနှင့် အခြားနိုင်ငံများ ဆက်ဆံရေးဝင်ဆံမှု ရှိရမည်ဖြစ်သည်။
ဥရောပတိုက်၏ ဘုံအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် နှင့်/သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာမှ နိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအသိအမှတ်ပြုထားသော နိုင်ငံတကာနှင့်ဆိုင်သော ဥရောပအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်းတွင် ပါဝင်သော နယ်မြေ၌ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် နိုင်ငံ ၅၀ ခုရှိသည်။ နိုင်ငံအားလုံးသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် လေ့လာသူနိုင်ငံများဖြစ်ကြပြီး ထို့ထဲတွင် ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၊ ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံနှင့် ဗာတီကန်စီးတီးတို့ မပါဝင်ပေ။ နိုင်ငံ ၄၄ ခု၏ မြို့တော်များသည် ဥရောပတိုက်တွင်း တည်ရှိပြီး (၂၀၂၀ ခုနှစ်အရ) ထိုအထဲမှ နိုင်ငံ ၂၇ နိုင်ငံသည် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ်ကြပြီး ဆိုလိုသည်မှာ ထိုနိုင်ငံများသည် နိုင်ငံတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ခိုင်မြဲစွာ ဆက်နွယ်နေပြီး ဥရောပသမဂ္ဂ၏ အဖွဲ့အစည်းများအောက်တွင် ၎င်းတို့၏ အချုပ်အခြာအာဏာအား မျှဝေကြသည်။
စာရင်းတွင် ပါဝင်သော နိုင်ငံဇယားတစ်ခုစီတွင် ၎င်းတို့၏ ဥရောပတိုက်တွင်း မြေပုံကို ထည့်သွင်းပေးထားသည်။ ဥရောတိုက်၏နယ်မြေတွင်းတွင် အစိမ်းရင့်ရောင်ဖြင့် ပြသထားပြီး ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာအရ နယ်မြေသည် ဥရောပတိုက်အတွင်း မရှိပါက အနည်းငယ်ဖျော့သော အစိမ်းရောင်ဖြင့် ပြသထားသည်။ အရောင်အဖျော့ဆုံးသော အစိမ်းရောင်သည် ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်း နယ်နိမိတ်ဖြစ်သော အခြားသောနိုင်ငံများကို ပြသထားသည်။
* = ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ
မြန်မာဘာသာဖြင့် အများနှင့် တရာဝင်အမည်များ
ဒေသတွင်း အများနှင့် တရားဝင်အမည်များ
ကာဇက်စတန် သမ္မတနိုင်ငံ ကာဇက်: Қазақстан – Қазақстан Республикасы (Qazaqstan – Qazaqstan Respýblıkasy)
ရုရှား: Казахстан – Республика Казахстан (Kazahstan – Respublika Kazahstan) Nur-Sultan
ရုရှား: Нур-Султан (Nur-Sultan) ၁၈,၃၁၁,၇၀၀ 02724900 !၂,၇၂၄,၉၀၀ km2 (၁,၀၅၂,၀၉၀ sq mi)
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ*[k] ချက်: Česko – Česká republika ပရက်ဂ်မြို့
ချက်: Praha ၁၀,၆၂၅,၄၄၉ 00078867 !၇၈,၈၆၇ km2 (၃၀,၄၅၁ sq mi)
ခရို‌အေးရှား သမ္မတနိုင်ငံ ခရိုအေးရှား: Hrvatska – Republika Hrvatska Zagreb
ခရိုအေးရှား: Zagreb ၄,၁၀၅,၄၉၃ 00056594 !၅၆,၅၉၄ km2 (၂၁,၈၅၁ sq mi)
ဂျာမနီ ဖက်ဒရယ် သမ္မတနိုင်ငံ ဂျာမန်: Deutschland – Bundesrepublik Deutschland ဘာလင်မြို့
ဂျာမန်: Berlin ၈၂,၈၀၀,၀၀၀ 00357022 !၃၅၇,၀၂၂ km2 (၁၃၇,၈၄၇ sq mi)
ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ[b] ဂျော်ဂျီယာ: საქართველო (Sak'art'velo) Tbilisi / T'bilisi
ဂျော်ဂျီယာ: თბილისი (T'bilisi) ၃,၇၂၉,၆၀၀ 00069700 !၆၉,၇၀၀ km2 (၂၆,၉၁၁ sq mi)
ဟယ်လင်နစ် သမ္မတနိုင်ငံ ဂရိ: Ελλάς – Ελληνική Δημοκρατία (Ellás – Ellinikí Dimokratía) အေသင်မြို့
ဂရိ: Αθήνα (Athína) ၁၀,၈၁၆,၂၈၆ 00131957 !၁၃၁,၉၅၇ km2 (၅၀,၉၄၉ sq mi)
စပိန်ဘုရင့်နိုင်ငံ စပိန်: España – Reino de España မဒရစ်မြို့
စပိန်: Madrid ၄၇,၇၂၀,၂၉၁ 00505370 !၅၀၅,၃၇၀ km2 (၁၉၅,၁၂၄ sq mi)
ဆန်မာရီနို သမ္မတနိုင်ငံ အီတလီ: San Marino – Repubblica di San Marino ဆန်မာရီနိုမြို့
အီတလီ: San Marino ၃၂,၇၄၂ 00000061 !၆၁ km2 (၂၄ sq mi)
ဆလိုဗက် သမ္မတနိုင်ငံ တမ်းပလိတ်:Lang-sk Bratislava
တမ်းပလိတ်:Lang-sk ၅,၄၄၅,၀၈၇ 00049035 !၄၉,၀၃၅ km2 (၁၈,၉၃၃ sq mi)
ဆလိုဗေးနီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ဆလိုဗေးနီးယား: Slovenija – Republika Slovenija Ljubljana
ဆလိုဗေးနီးယား: Ljubljana ၂,၀၇၀,၀၅၀ 00020273 !၂၀,၂၇၃ km2 (၇,၈၂၇ sq mi)
ဆွစ်ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း ဂျာမန်: Schweiz – Schweizerische Eidgenossenschaft
ပြင်သစ်: Suisse – Confédération suisse
အီတလီ: Svizzera – Confederazione Svizzera
အီတလီ: Berna ၈,၅၄၄,၀၃၄ 00041277 !၄၁,၂၇၇ km2 (၁၅,၉၃၇ sq mi)
ဆွီဒင် ဘုရင့်နိုင်ငံ ဆွီဒင်: Sverige – Konungariket Sverige စတော့ဟုမ်းမြို့
ဆွီဒင်: Stockholm ၁၀,၂၂၁,၉၈၈ 00450295 !၄၅၀,၂၉၅ km2 (၁၇၃,၈၆၀ sq mi)
ဆားဘီးယား သမ္မတနိုင်ငံ ဆားဘီးယား: Србија – Република Србија, Srbija – Republika Srbija Belgrade
ဆားဘီးယား: Београд, Beograd ၇,၀၀၁,၄၄၄ 00088361 !၈၈,၃၆၁ km2 (၃၄,၁၁၆ sq mi)
ဆိုက်ပရပ်စ် သမ္မတနိုင်ငံ ဂရိ: Κύπρος – Κυπριακή Δημοκρατία (Kýpros – Kypriakí Dimokratía)
တူရကီ: Kıbrıs – Kıbrıs Cumhuriyeti နီကိုးရှားမြို့
ဂရိ: Λευκωσία (Lefkosía)
တူရကီ: Lefkoşa ၁,၁၇၂,၄၅၈ 00009251 !၉,၂၅၁ km2 (၃,၅၇၂ sq mi)
တူရကီ သမ္မတနိုင်ငံ တူရကီ: Türkiye – Türkiye Cumhuriyeti အန်ကာရာမြို့
တူရကီ: Ankara ၈၀,၈၁၀,၅၂၅ 00783562 !၇၈၃,၅၆၂ km2 (၃၀၂,၅၃၅ sq mi)
ဒိန်းမတ် ဘုရင့်နိုင်ငံ ဒိန်းမတ်: Danmark – Kongeriget Danmark ကိုပင်ဟေဂင်မြို့
ဒိန်းမတ်: København ၅,၈၀၆,၀၁၅ 00043094 !၂,၂၁၀,၀၀၀ km2 (၈၅၃,၂၈၆ sq mi)
နယ်သာလန် ဘုရင့်နိုင်ငံ ဒတ်ချ်: Nederland – Koninkrijk der Nederlanden
တမ်းပလိတ်:Lang-pap အမ်စတာဒမ်မြို့ (မြို့တော်)
ဒတ်ချ်: 's-Gravenhage / Den Haag
တမ်းပလိတ်:Lang-pap ၁၇,၂၇၂,၉၉၀ 00041543 !၄၁,၅၄၃ km2 (၁၆,၀၄၀ sq mi)
နော်ဝေ ဘုရင့်နိုင်ငံ တမ်းပလိတ်:Lang-nb
နော်ဝေး: Oslo ၅,၃၂၃,၉၃၃ 00323802 !၃၈၅,၂၀၇ km2 (၁၄၈,၇၂၉ sq mi)
ပြင်သစ် သမ္မတနိုင်ငံ ပြင်သစ်: France – République française ပါရီမြို့
ပြင်သစ်: Paris ၆၇,၃၄၈,၀၀၀ 00643427 !၅၄၃,၉၄၀ km2 (၂၁၀,၀၁၆ sq mi)
ပိုလန် သမ္မတနိုင်ငံ ပိုလန်: Polska – Rzeczpospolita Polska ဝါဆောမြို့
ပိုလန်: Warszawa ၃၈,၄၃၃,၆၀၀ 00312685 !၃၁၂,၆၈၅ km2 (၁၂၀,၇၂၈ sq mi)
ပေါ်တူဂီ သမ္မတနိုင်ငံ ပေါ်တူဂီ: Portugal – República Portuguesa လစ်စဘွန်းမြို့
ပေါ်တူဂီ: Lisboa ၁၀,၂၉၁,၁၉၆ 00092090 !၉၂,၀၉၀ km2 (၃၅,၅၅၆ sq mi)
Republic of Finland ဖင်လန်: Suomi – Suomen tasavalta
ဆွီဒင်: Finland – Republiken Finland ဟယ်လ်ဆင်ကီမြို့
ဆွီဒင်: Helsingfors ၅,၅၁၉,၄၆၃ 00338145 !၃၃၈,၁၄၅ km2 (၁၃၀,၅၅၉ sq mi)
ဗာတီကန်စီးတီးနိုင်ငံ အီတလီ: Città del Vaticano – Stato della Città del Vaticano
လက်တင်: Sancta Sedes ဗာတီကန်စီးတီး
အီတလီ: Città del Vaticano ၈၄၂ 00000000.44 !၀.၄၄ km2 (၀.၁၇ sq mi)
ဘယ်လ်ဂျီယမ် ဘုရင့်နိုင်ငံ ဒတ်ချ်: België – Koninkrijk België
ပြင်သစ်: Belgique – Royaume de Belgique
ဂျာမန်: Belgien – Königreich Belgien ဘရပ်ဆဲလ်မြို့
ဂျာမန်: Brüssel ၁၁,၅၀၂,၂၀၄ 00030528 !၃၀,၅၂၈ km2 (၁၁,၇၈၇ sq mi)
ဘီလာရုဇ် သမ္မတနိုင်ငံ တမ်းပလိတ်:Lang-be (Bielaruś – Respublika Bielaruś)
ရုရှား: Беларусь – Республика Беларусь (Belarus' — Respublika Belarus') မင့်စ်မြို့
တမ်းပလိတ်:Lang-be (Minsk) ၉,၄၉၁,၈၀၀ 00207600 !၂၀၇,၆၀၀ km2 (၈၀,၁၅၅ sq mi)
ဘူလ်ဂေးရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ တမ်းပလိတ်:Lang-bg (Bǎlgarija – Republika Bǎlgarija) ဆိုဖီယာမြို့
တမ်းပလိတ်:Lang-bg (Sofia) ၇,၀၅၀,၀၃၄ 00110879 !၁၁၀,၈၇၉ km2 (၄၂,၈၁၁ sq mi)
ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနားနိုင်ငံ Bosnian, Croatian, Serbian (Latin): Bosna i Hercegovina
Bosnian, Serbian (Cyrillic): Босна и Херцеговина ဆာရာယေဗိုမြို့
Bosnian, Serbian (Cyrillic): Сарајево ၃,၅၁၁,၃၇၂ 00051197 !၅၁,၁၉၇ km2 (၁၉,၇၆၇ sq mi)
မြောက်မက်စီဒိုးနီးယား သမ္မတနိုင်ငံ တမ်းပလိတ်:Lang-mk (Severna Makedonija – Republika Severna Makedonija) Skopje
တမ်းပလိတ်:Lang-mk (Skopje) ၂,၀၇၅,၃၀၁ 00025713 !၂၅,၇၁၃ km2 (၉,၉၂၈ sq mi)
မွန်တီနီဂရိုးနိုင်ငံ[j] Montenegrin: Црна Гора, Crna Gora ပေါ့ဒ်ဂိုရစ်ဆာမြို့
Montenegrin: Подгорица, Podgorica ၆၄၂,၅၅၀ 00013812 !၁၃,၈၁၂ km2 (၅,၃၃၃ sq mi)
မိုနာကို ပဒေသရာဇ်နိုင်ငံတော် ပြင်သစ်: Monaco – Principauté de Monaco မိုနာကိုမြို့
ပြင်သစ်: Monaco ၃၇,၀၀၀ 00000002 !၂ km2 (၀.၈ sq mi)
မော်လတာ သမ္မတနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Malta – Republic of Malta
မောတီးစ်: Malta – Repubblika ta' Malta ဗယ်လက်တာမြို့
မောတီးစ်: Valletta ၄၇၅,၇၀၀ 00000316 !၃၁၆ km2 (၁၂၂ sq mi)
မော်လ်ဒိုဗာ သမ္မတနိုင်ငံ ရိုမေးနီးယား: Moldova – Republica Moldova Chișinău
ရိုမေးနီးယား: Chișinău ၃,၃၅၀,၉၀၀ 00033851 !၃၃,၈၅၁ km2 (၁၃,၀၇၀ sq mi)
ယူကရိန်းနိုင်ငံ ယူကရိန်း: Украïна (Ukraina)
ရုရှား: Украи́на (Ukraína) ကီးယက်မြို့
ယူကရိန်း: Київ (Kyiv)
ရုရှား: Киев (Kiyev) ၄၄,၂၉၁,၄၁၃ 00602550 !၆၀၃,၅၅၀ km2 (၂၃၃,၀၃၂ sq mi)
ဂရိတ်ဗြိတိန်နှင့် မြောက်အိုင်ယာလန် ပေါင်းစည်း ဘုရင့်နိုင်ငံတော် အင်္ဂလိပ်: United Kingdom – United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
တမ်းပလိတ်:Lang-cy လန်ဒန်မြို့ ၆၆,၀၄၀,၂၂၉ 00243610 !၂၄၃,၆၁၀ km2 (၉၄,၀၅၈ sq mi)
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ* ရိုမေးနီးယား: România ဗူးခရက်မြို့
ရိုမေးနီးယား: București ၁၉,၆၂၂,၀၀၀ 00238391 !၂၃၈,၃၉၁ km2 (၉၂,၀၄၃ sq mi)
ရုရှား ဖက်ဒရေးရှင်း ရုရှား: Россия – Российская Федерация (Rossija – Rossijskaja Federacija) မော်စကိုမြို့
ရုရှား: Москва (Moskva) ၁၄၄,၅၂၆,၆၃၆ 17098242 !၁၇,၀၉၈,၂၄၂ km2 (၆,၆၀၁,၆၆၈ sq mi)
လစ်တန်စတိန်း ပဒေသရာဇ်နိုင်ငံ ဂျာမန်: Liechtenstein – Fürstentum Liechtenstein Vaduz
ဂျာမန်: Vaduz ၃၈,၁၁၁ 00000160 !၁၆၀ km2 (၆၂ sq mi)
လစ်သူယေးနီးယား သမ္မတနိုင်ငံ လစ်သူရေးနီးယား: Lietuva – Lietuvos Respublika Vilnius
လစ်သူရေးနီးယား: Vilnius ၂,၇၉၇,၀၀၀ 00065300 !၆၅,၃၀၀ km2 (၂၅,၂၁၂ sq mi)
လတ်ဗီယာသမ္မတနိုင်ငံ တမ်းပလိတ်:Lang-lv ရီဂါမြို့
တမ်းပလိတ်:Lang-lv ၁,၉၃၄,၃၇၉ 00064589 !၆၄,၅၈၉ km2 (၂၄,၉၃၈ sq mi)
Grand Duchy of Luxembourg တမ်းပလိတ်:Lang-lb
ပြင်သစ်: Luxembourg – Grand-Duché de Luxembourg
ဂျာမန်: Luxemburg – Großherzogtum Luxemburg လူဇင်ဘတ်မြို့
ဂျာမန်: Luxemburg ၆၀၂,၀၀၀ 00002586 !၂,၅၈၆ km2 (၉၉၈ sq mi)
ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ* ဟန်ဂေရီ: Magyarország ဘူဒါပတ်စ်မြို့
ဟန်ဂေရီ: Budapest ၉,၇၇၁,၀၀၀ 00093028 !၉၃,၀၂၈ km2 (၃၅,၉၁၈ sq mi)
အက်စ်တိုးနီးယား သမ္မတနိုင်ငံ အက်စတိုးနီးယား: Eesti – Eesti Vabariik Tallinn
အက်စတိုးနီးယား: Tallinn ၁,၃၁၅,၀၀၀ 00045228 !၄၅,၂၂၈ km2 (၁၇,၄၆၃ sq mi)
အင်ဒိုရာ မင်းသားနိုင်ငံ ကတ်တလန်: Andorra – Principat d'Andorra Andorra la Vella
ကတ်တလန်: Andorra la Vella ၇၈,၀၀၀ 00000468 !၄၆၈ km2 (၁၈၁ sq mi)
တမ်းပလိတ်:Lang-az ၉,၈၉၈,၀၈၅ 00086600 !၈၆,၆၀၀ km2 (၃၃,၄၃၆ sq mi)
အယ်လ်ဘေးနီးယား သမ္မတနိုင်ငံ အယ်လ်ဘေးနီးယား: Shqipëri / Shqipëria – RepublikaeShqipërisë တီရာနာမြို့
အယ်လ်ဘေးနီးယား: Tiranë ၂,၈၈၇,၀၀၀ 00028748 !၂၈,၇၄၈ km2 (၁၁,၁၀၀ sq mi)
အာမေးနီးယား သမ္မတနိုင်ငံ တမ်းပလိတ်:Lang-hy (Hayastan – Hayastani Hanrapetut'yun) ယေရေဗန်မြို့
တမ်းပလိတ်:Lang-hy (Yerevan) ၂,၉၂၅,၀၀၀ 00029743 !၂၉,၇၄၃ km2 (၁၁,၄၈၄ sq mi)
အိုက်စလန်နိုင်ငံ အိုက်စလန်: Ísland Reykjavík
အိုက်စလန်: Reykjavík ၃၅၀,၇၁၀ 00103000 !၁၀၃,၀၀၀ km2 (၃၉,၇၆၉ sq mi)
အိုင်ယာလန် သမ္မတနိုင်ငံ အိုင်းရစ်: Éire
အင်္ဂလိပ်: Ireland ဒပ်ဗလင်မြို့
အိုင်းရစ်: Baile Átha Cliath ၄,၈၅၇,၀၀၀ 00070273 !၇၀,၂၇၃ km2 (၂၇,၁၃၃ sq mi)
အီတလီ သမ္မတနိုင်ငံ အီတလီ: Italia – Repubblica Italiana ရောမမြို့
အီတလီ: Roma ၆၀,၄၉၄,၁၁၈ 00301340 !၃၀၁,၃၄၀ km2 (၁၁၆,၃၄၈ sq mi)
ဩစတြီးယား သမ္မတနိုင်ငံ ဂျာမန်: Österreich – Republik Österreich ဗီယင်နာမြို့
ဂျာမန်: Wien ၈,၈၅၇,၉၆၀ 00083874 !၈၃,၈၇၁ km2 (၃၂,၃၈၃ sq mi)
ဖော်ပြပါ ဥ‌ရောပတိုက်အတွင်းအရှိ နိုင်ငံ ၆ ခုမှာ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခု သို့မဟုတ် ထိုထက်ပို၍ သံတမန်ရေးအရ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသိအမှတ်ပြုထားသော သို့မဟုတ် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ သံတမန်ရေးအရ အသိအမှတ်ပြုခြင်း မခံရသော နိုင်ငံများဖြစ်သော်လည်း အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံအဖြစ် ကြေညာထားကြသော နိုင်ငံများဖြစ်သည်။ ထိုနိုင်ငံများသည် ကုလသမဂ္ဂ၊ ဥရောပကောင်စီနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ မဟုတ်ကြပေ။
ဒေသတွင်း အများနှင့် တရာဝင်အမည်များ
Republic of Abkhazia Claimed as an autonomous republic of Georgia. Recognised by five UN states. တမ်းပလိတ်:Lang-ab (Apsny)
ရုရှား: Абха́зия (Abhazia) Sukhumi
ရုရှား: Сухум 250,000 ၈,၆၆၀ km2 (၃,၃၄၄ sq mi)
Republic of Artsakh Claimed as part of Azerbaijan. De facto independent state, recognised by3non-UN states. တမ်းပလိတ်:Lang-hy (Arts'akhi Hanrapetut'yun) Stepanakert
တမ်းပလိတ်:Lang-hy (Khankendi) 141,400 ၇,၀၀၀ km2 (၂,၇၀၃ sq mi)
ကိုဆိုဗို သမ္မတနိုင်ငံ Claimed by Serbia. Has been recognized as sovereign by [[International recognition of Kosovo|တမ်းပလိတ်:Numrec UN member states]] (including states that subsequently withdrew recognition). အယ်လ်ဘေးနီးယား: Kosova / Kosovë – RepublikaeKosovës
ဆားဘီးယား: Косово – Република Косово, Kosovo – Republika Kosovo Pristina
အယ်လ်ဘေးနီးယား: Prishtina, Prishtinë
ဆားဘီးယား: Приштина, Priština 1,836,529 ၁၀,၈၈၇ km2 (၄,၂၀၃ sq mi)
Turkish Republic of Northern Cyprus Claimed as part of the Republic of Cyprus. Recognised by Turkey. တူရကီ: Kuzey Kıbrıs – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti North Nicosia
တူရကီ: Lefkoşa 294,906 ၃,၃၅၅ km2 (၁,၂၉၅ sq mi)
Republic of South Ossetia Claimed as part of Georgia. Recognised by five UN states. တမ်းပလိတ်:Lang-os (Khussar Iryston – Respublikæ Khussar Iryston)
ရုရှား: Южная Осетия – Республика Южная Осетия (Yuzhnaya Osetiya – Respublika Yuzhnaya Osetiya) Tskhinvali
Pridnestrovian Moldavian Republic Claimed asaterritorial unit of Moldova. De facto independent state, recognised by3non-UN states. ရိုမေးနီးယား: Nistreană – Republica Moldovenească Nistreană (Nistreană – Republica Moldovenească Nistreană)
ရုရှား: Приднестровье – Приднестровская Молдавская Республика (Pridnestrov'ye – Pridnestrovskaya Moldavskaya Respublika)
ယူကရိန်း: Придністров'я – Придністровська Молдавська Республіка (Prydnistrov'ya – Pridnistrovs'ka Moldavs'ka Respublika) Tiraspol
ယူကရိန်း: Тирасполь 530,000 ၃,၅၀၀ km2 (၁,၃၅၁ sq mi)
အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရ အစိတ်အပိုင်းများ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဖော်ပြပါနေရာတို့သည် ၎င်းတို့အား ထိန်းချုပ်သောအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူထားကြသည်။ ဩကျွန်းနှင့် ဆဗာဘတ်ကျွန်းစုသည် နိုင်ငံတကာသဘောတူညီမှုများအရ နိုင်ငံရေးသဘောတူညီမှုများ ရှိကြသည်။
* = ဥရောပသမဂ္ဂ၏ အစိတ်အပိုင်း၊ အထူးသဘောတူညီအရ
Local common and formal names
ဖင်လန်နိုင်ငံ၏ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရရှိထာသော ဒေသတခုဖြစ်ပြီး ၁၉၂၁ တွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အတည်ပြုခဲ့သည်။
Autonomous region of Finland, with autonomy granted in 1921 as an answer to the Åland islands question ဆွီဒင်: Åland – Landskapet Åland Mariehamn
ဆွီဒင်: Mariehamn 27,500 ၆,၇၈၇ km2 (၂,၆၂၀ sq mi)
Faroe Islands Autonomous territory and constituent part of the Kingdom of Denmark ဒိန်းမတ်: Færøerne
တမ်းပလိတ်:Lang-fo 49,947 ၁,၃၉၃ km2 (၅၃၈ sq mi)
Jan Mayen Territory and constituent part of the Kingdom of Norway နော်ဝေး: Jan Mayen No permanent population ၃၇၃ km2 (၁၄၄ sq mi)
Northern Ireland Part of the United Kingdom, with devolved government determined by the Good Friday Agreement အင်္ဂလိပ်: Northern Ireland
တမ်းပလိတ်:Lang-sco Belfast 1,810,863 ၁၄,၁၃၀ km2 (၅,၄၅၆ sq mi)
Svalbard Territory and constituent part of the Kingdom of Norway, as determined by the Svalbard Treaty နော်ဝေး: Svalbard Longyearbyen
နော်ဝေး: Longyearbyen 2,019 ၆၂,၀၄၅ km2 (၂၃,၉၅၆ sq mi)
ဖော်ပြပါ ဒေသ ၅ ခုမှ အမှီအခိုနယ်မြေများဖြစ်ကြသည်။
Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia ဗြိတိသျှ ပင်လယ်ရပ်ခြား နယ်မြေ အင်္ဂလိပ်: Akrotiri and Dhekelia – Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia Episkopi Cantonment
အင်္ဂလိပ်: Episkopi Cantonment 15,700 ၂၅၄ km2 (၉၈ sq mi)
ဂျီဘရော်လ်တာ ဗြိတိသျှ ပင်လယ်ရပ်ခြား နယ်မြေ အင်္ဂလိပ်: Gibraltar ဂျီဘရော်လ်တာမြို့
အင်္ဂလိပ်: Gibraltar 29,185 ၆.၅ km2 (၂.၅ sq mi)
Bailiwick of Guernsey British crown dependency အင်္ဂလိပ်: Guernsey – Bailiwick of Guernsey
ပြင်သစ်: Guernesey – Bailliage de Guernesey
အင်္ဂလိပ်: Saint Peter Port
ပြင်သစ်: Saint Pierre Port
Guernésiais: Saint Pierre Port 65,849 ၇၈ km2 (၃၀ sq mi)
Isle of Man[i] British crown dependency အင်္ဂလိပ်: Isle of Man
တမ်းပလိတ်:Lang-gv 86,866 ၅၇၂ km2 (၂၂၁ sq mi)
Bailiwick of Jersey British crown dependency အင်္ဂလိပ်: Jersey – Bailiwick of Jersey
ပြင်သစ်: Jersey – Bailliage de Jersey
အင်္ဂလိပ်: Saint Helier
Jèrriais: Saint Hélyi 96,513 ၁၁၈ km2 (၄၆ sq mi)
↑ Charles T. Evans (1 July 2009)။ Ural Mountains။ Novaonline.nvcc.edu။ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Ural River။ Geography.howstuffworks.com (30 March 2008)။ 12 July 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Charles T. Evans (1 July 2009)။ Caucasus Mountains,။ Novaonline.nvcc.edu။ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Charles T. Evans (1 July 2009)။ Black Sea။ Novaonline.nvcc.edu။ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅.၀ ၅.၁ Microsoft Encarta Online Encyclopaedia 2007။ Europe။ 31 October 2009 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 December 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Council of Europe in Brief။ Coe.int။ 22 July 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Geological Development of the Sicilian-Tunisian Platform held in Italy (University of Urbino) on November 4, 5, 6, 1992။ Oai.dtic.mil (6 November 1992)။ 22 July 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Understanding plate motions [This Dynamic Earth, USGS]။ Pubs.usgs.gov (9 June 1994)။ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ CIA - The World Factbook။ Cia.gov။9May 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Richard Connor (11 January 2010)။ French overseas territories vote to remain close to Paris။ Dw-world.de။ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Regions and territories: Ceuta, Melilla"၊ BBC News၊6October 2010။ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၂.၀ ၁၂.၁ Netherlands။ Cia.gov။ 21 May 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Untying the Sovereign State: A Double Reading of the Anarchy Problematique။ Mil.sagepub.com (1 June 1988)။ 11 December 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Montevideo Convention on the Rights and Duties of States - Council on Foreign Relations။ Cfr.org။ 28 June 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ United Nations Member States။ United Nations။ ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 47 countries, 1 Europe။ Council of Europe။ 19 March 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Member States။ Europa။ ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၈.၀ ၁၈.၁ ၁၈.၂ ၁၈.၃ ၁၈.၄ Field Listing :: Names။ Central Intelligence Agency။ 25 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၉.၀ ၁၉.၁ UNGEGN List of Country Names။ United Nations Statistics Division (2007)။ ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၀.၀ ၂၀.၁ ၂၀.၂ ၂၀.၃ ၂၀.၄ ၂၀.၅ List of countries, territories and currencies။ Europa (9 August 2011)။ ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၁.၀ ၂၁.၁ ၂၁.၂ ၂၁.၃ Field Listing :: Capital။ Central Intelligence Agency။ 25 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UNGEGN World Geographical Names။ United Nations Group of Experts on Geographical Names (13 September 2010)။ ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၃.၀ ၂၃.၁ ၂၃.၂ ၂၃.၃ Country Comparison :: Population။ Central Intelligence Agency (July 2014)။ 27 September 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၄.၀ ၂၄.၁ ၂၄.၂ ၂၄.၃ ၂၄.၄ ၂၄.၅ Field Listing :: Area။ Central Intelligence Agency။ 31 January 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Turkey’s population hits 79.81 million people, increasing over one million။ Hürriyet Daily News။ ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Holy See (Vatican City)။ Cia.gov။7January 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Republic of Ireland Act, 1948။ No. 22/1948 (1948)။ 16 December 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၈.၀ ၂၈.၁ Tuvalu Retracts Recognition of Abkhazia, South Ossetia။ Radio Free Europe/Radio Liberty (31 March 2014)။
↑ "Regions and territories: Abkhazia"၊ BBC News၊ 8 February 2011။ 17 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on5November 2019။
↑ Abkhazia (autonomous republic, Georgia)။ Britannica.com။3March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၁.၀ ၃၁.၁ Ker-Lindsay၊ James (2012)။ The Foreign Policy of Counter Secession: Preventing the Recognition of Contested States။ Oxford University Press။ p. 53။ ...there are three other territories that have unilaterally declared independence and are generally regarded as having met the Montevideo criteria for statehood but have not been recognised by any states: Transnistria, Nagorny Karabakh, and Somaliland. .
↑ Country Overview။ nkrusa.org။7March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Official website of the President of the Artsakh Republic။ President.nkr.am (1 January 2010)။ 17 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Nagorno-Karabakh (region, Azerbaijan)။ Britannica.com။3March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Countries that have recognised the Republic of Kosova။ Ministry of Foreign Affairs of Kosovo။
↑ Cyprus။ Encyclopædia Britannica။
↑ Turkish Cyprus announces population as 294,906။ World Bulletin (9 December 2011)။9January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Regions and territories: South Ossetia"၊ BBC News၊ 8 February 2011။ 17 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ South Ossetia။ Hartford-hwp.com။9March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Trans-Dniester profile"၊ BBC News၊ 20 January 2011။ 17 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Transdniestria (separatist enclave, Moldova)။ Britannica.com။3March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ European Commission for Democracy through Law (1996)။ Local self-government, territorial integrity, and protection of minorities: proceedings of the UniDem Seminar organised in Lausanne on 25–27 April 1996, in co-operation with the Swiss Institute of Comparative Law။ Strasbourg: Council of Europe။ pp. 32–35။ ISBN 92-871-3173-2။
↑ Independence။ Visitaland.com။7January 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄၄.၀ ၄၄.၁ Åland Official Tourist Gateway - Facts။ Visitaland.com။ 10 February 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Good Friday Agreement။7July 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄၆.၀ ၄၆.၁ The Countries of the UK။ Office for National Statistics (United Kingdom)။7July 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Northern Ireland Statistics & Research Agency (December 2012)။ Census 2011 Key Statistics for Northern Ireland။ 24 December 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 January 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Svalbard Treaty။ Governor of Svalbard (9 April 2008)။4March 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ CIA - The World Factbook - Field Listing :: Dependency status။ Cia.gov (9 February 1920)။ 25 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gibraltar; Politics။ The Guardian (4 August 2004)။ 17 February 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅၁.၀ ၅၁.၁ Supreme Court decision။ 8 October 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6October 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅၂.၀ ၅၂.၁ Queen and Crown dependencies page of the official website of the British Monarchy Archived 21 September 2012 at the Wayback Machine.
↑ ၅၃.၀ ၅၃.၁ ၅၃.၂ Ministry of Justice's fact sheet on the UK's relationship with the Crown Dependencies
↑ Supreme Court decision "The Channel Islands, like the Isle of Man (although it hasarather different history), are not part of the United Kingdom. Nor have they ever been British colonies, or British Overseas Territories as the few remaining colonies are now termed. They are crown dependencies, enjoyingaunique relationship with the United Kingdom and the rest of the British Commonwealth through the Crown, in the person of the Sovereign."။ 8 October 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6October 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဥရောပတိုက်ရှိ_အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့်_အမှီအခိုနယ်မြေများ_စာရင်း&oldid=743296" မှ ရယူရန်
လစ်သူရေးနီးယားဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဥရောပတိုက်ရှိ နိုင်ငံများ၏ စာရင်းများ
အက်စတိုးနီးယားဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
အိုက်စလန်ဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၃:၄၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။